တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: October 2012
တနေ့သ၌ မေဓာဝီတယောက် ဦးရီးတော်၏ စီးတော်ယာဉ်သိုလှောင်ရာ ရုံထဲတွင် တစုံတရာကို အားကြိုးမာန်တက် ရှာဖွေနေသတတ်။ နံရံကပ်စင်မြင့်မှအစ၊ ဘီရိုပုလေးများ အလယ်၊ တိုလီမုတ်စ ထည့်သည့် ပလပ်စတစ်ဇကာလေးများ အဆုံး တကုံးကုံး ရှာဖွေရင်း နှုတ်မှ အချစ် အချစ် … အချစ်ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဟု မြည်တွန်တောက်တီးကာ မော့တန်မော့ ငုံ့တန်ငုံ့ ခြေဖျားထောက်လိုက် ခါးကိုင်းလိုက်နှင့် ချောင်ကြိုချောင်ကြား မကျန် ပြူးပြဲရှာဖွေသော်လည်း အချည်းနှီးပင်။ ဘိလပ်၏ အေးချမ်းသော ဆောင်းဦးရာသီတွင်ပင် နဖူးကချွေး နသယ်စပ် ရောက်မတတ် အိုက်စပ် ပင်ပန်းကြီးစွာ အချစ်ကို ရှာဖွေရင်း နောက်ဆုံးတော့ လက်လျှော့လိုက်ရချေပြီ။
သြော် … အချစ် … အချစ် … မည်သို့ပင် ရှာရှာ … သင့်အား ရှာဖွေ၍ မတွေ့လေတော့ပြီတကား။
သင် … ဘယ်မှာလဲ … အချစ် … ။
ဤ အချစ်ပျောက်ရှာပုံတော်သည် ဦးရီးတော်၏ ဂေဟာ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှ အစပြုလေသည်။ ကျမ မြန်မာပြည်မှာရှိနေစဉ် တခုသော ကြာသပတေးနေ့၏ ညနေခင်း၌ ဘိလပ်၏ အနောက်အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလေသည်။ ထိုရောအခါ ဦးရီးတော် ဂေဟာတည်ရှိရာ ရွာငယ်ကလေးရှိ လမ်းမကြီးပေါ်မှ ရေများသည် စနစ်တကျ ဖောက်လုပ်ထားသော ရေမြောင်းတွင်းသို့ အလျင်မီအောင် မစီးဆင်းနိုင်တော့ဘဲ မြေအနိမ့်ပိုင်းရှိရာ ဦးရီးတော် ဂေဟာသို့ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲ ရှိလေတော့သည်။ ထိုနေ့က ကြာသပတေးနေ့တို့ ထုံးစံအတိုင်း ဦးရီးတော်က တနေကုန် အလုပ်ဆင်းရသဖြင့် အိမ်၌ မရှိ။ အိမ်မှာ အိမ်ရှင်မရှိသော်လည်း ကိုရွှေဧည့်သည် မိုးရေများသည် အိမ်ရှင်ပြန်လာသည်ကိုပင် မစောင့်နိုင်အားဘဲ ဂိုဒေါင်ထဲမှ မီးဖိုချောင်၊ မီးဖိုမှတဆင့် ဧည့်ခန်း၊ ထိုမှ အိမ်သာ ဖိနပ်ချွတ် စသဖြင့် တဆင့်ပြီးဆင့် ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်ရင်း အိမ်အောက်ထပ် တထပ်လုံး ဖြန့်ကျက် ပြန့်နှံ့၍ နေလေတော့၏။ ဦးရီးတော် အလုပ်ပြီး၍ အိမ်ပြန်ရောက်သော် အိမ်အောက်ထပ် တထပ်လုံးရှိ ကော်ဇောများမှာ ကျူးကျော်သူ မိုးရေများကြောင့် နင်းရက်စရာပင် မရှိတော့ချေ။ သို့ဖြင့် …. … … ။
အာမခံဌာနက ဦးရီးတော်အား ဟိုတယ်မှာ သွားနေဟု ဆိုသော်လည်း မနေ၊ အိမ်ခန်းငှားပေးမည်ဆိုလည်း လက်မခံ၊ မိုးရေလွတ်ရာ အိမ်ပေါ်ထပ်ရှိ အိပ်ခန်းတွင်း၌ပင် နေထိုင်ရင်း အောက်ထပ်မှ ပစ္စည်းများကို ရေလွတ်ရာရွှေ့၊ ပျက်စီးသည်များကို လွှင့်ပစ်ပြီး နေလာလိုက်ရာ ပစ္စည်းတွေ ဟိုရောက် ဒီရောက် ဗြောင်းဆန် ကုန်လေတော့သည်။ ထိုအခါ ကားဂိုဒေါင်ဟု သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ခေါ်ဆိုရသော်လည်း ကားမှလွဲ၍ အကုန်ထည့်ထားသည့် နေရာရှိ ပစ္စည်းများသည်လည်း ကျမ ပြန်လာသောအခါ ဘယ်ဆီရောက်၍ ဘယ်ဆီပေါက်ကုန်မှန်း မသိတော့ပါချေ။ ကျမ မြန်မာပြည် မသွားခင် ထားထားသည့် ခြေရာလက်ရာ ဖိနပ်ရာများသည် မိုးရေတိုက်စားခြင်းကြောင့် ပျက်ယွင်းကုန်ပါပကော။ ဂိုဒေါင်ထဲရှိ သံချောင်းတွင် ချိတ်ထားသော ကျမအချစ်သည်လည်း လွှင့်ပစ်ပစ္စည်းထဲ ပါသွားလေသလား၊ မမြင်နိုင်သည့် ချောင်ကြိုချောင်ကြားထဲပဲ ညပ်နေလေမလား … ။ စဉ်းစားရခက်ပါဘိတော့ … ။
သြော် အချစ်ကို ဂိုဒေါင်ထဲ ချိတ်သည်ဟူ၍ တမျိုးမထင်ကြပါနှင့်။ အမှန်တကယ်ကား တပေါင်ဖိုး ၃ လုံးဖြင့် ၀ယ်လာသော မုန်လာဥဖြူတွေကို ခြစ်၍ သုတ်မည်ကြံကာ ခြစ်သည့် စိန်ခလုတ် လိုက်ရှာနေခြင်းပင်။ (ဒီတခါလဲ ယပင့် (-ျ) နဲ့ ရရစ် (ြ- ) ပြောင်းဖတ်ပေးကြပါအုံးဗျို့။)
အခြစ် (ခုတော့ စာလုံးပေါင်း မှန်သွားပြီ) ရှာမတွေ့သည့် နောက်ဆုံး လက်လျှော့လိုက်ရသော်လည်း ကိစ္စမရှိ၊ ကျမက အခြစ်ကို အစားထိုးတတ်ပါသည်။ ငကန်းသေ ငစွေပေါ်လိမ့်မယ် ဟူသော စကားပုံအရ … အခြစ်မရှိသည့်နောက် မုန်လာဥများကို မခြစ်ဘဲ ဓားလေးနှင့် စွေစွေကလေးလှီးကာ ဦးရီးတော်ကို သုပ်ကျွေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဦးရီးတော်က တခါတုန်းက ပန်းသီးများကို ခြစ်ပြီးသုပ်ကျွေးဖူးတာ အမှတ်ရသည်ထင့် … စားရင်းသောက်ရင်း ပန်းသီးအကြောင်း စကားစ လေတော့သည်။ (ခုမှ ပန်းသီးဇာတ်လမ်းက စမှာ)
“သမီး ပန်းသီးအချဉ်တည်ထားတာတွေ ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ရှိသေးတယ်နော် … မှိုလေးတွေတောင် တက်နေပြီ”
ဦးရီးတော်က ထိုသို့ပင်၊ မှိုတက်တာတောင် နူးညံ့ညင်သာစွာ မှိုလေးတွေ တက်နေပြီဟု ချစ်စဖွယ် သုံးနှုန်းပေသည်။ ဦးရီးတော်ပြောမှ ကျမလည်း ထိုပန်းသီးချဉ် ပုလင်းကြီးကို သတိရမိ၏။ စာဖတ်သူများ မှတ်မိကြလေမလားတော့ မသိ။ တချိန်က ခြစ်၍မကုန်သော ပန်းသီးများကို ပုလင်းကြီးတလုံးနှင့် ဆားရည်စိမ်ပြီး အချဉ်တည်ထားသည်မှာ တနှစ်ပင် ကျော်လုပြီ။ ကျမလည်း ထိုပန်းသီးများ ရခါစ၌သာ ခြစ်၍ သုတ်ခြင်း၊ ချက်ခြင်းများ စွမ်းစွမ်းတမံ ပြုလုပ်သော်လည်း ကြာလာသောအခါ ဆားရည်စိမ် ပန်းသီးပုလင်းကြီးအား ဂိုဒေါင်ထဲ သိမ်းထားရင်း မေ့လျော့၍ သွားလေသည်။ ဦးရီးတော်၏ ဂိုဒေါင်၌ ကုန်ပစ္စည်းအ၀င်က များ၍ အထွက်ကား နည်းလှ၏။ စားသုံးသူဟူ၍ ကျမနှင့် ဦးရီးတော်သာ ရှိသည်မို့ ပထမ ၀ယ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ မကုန်ခင် နောက်ထပ် ရောက်ရောက်လာပြန်ရာ အလျင်မီအောင် မနည်းစားနေရသည်။ demand နည်းပြီး supply များနေသည်ဟု ဆိုရလေမလား။
ကျမက စာရင်းအင်း ပညာသည်ပီပီ ကုန်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု (inventory management) အရာ၌ အလွန်ကျွမ်းကျင် လိမ္မာသည်မို့ စာထဲမှာ သင်ရသည့်အတိုင်း FIFO (First In First Out) စနစ်လဲ မသုံး LIFO (Last in First Out) စနစ်လဲ မသုံးဘဲ LTY-STK (လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်) သည့်စနစ်သာ ကိုယ့်ဘာသာ တီထွင် ကျင့်သုံးနေရကား အနှီ ပန်းသီးပုလင်းကြီးသည် လက်မသင့်သည့် စာရင်းထဲ တစတစ ရောက်သွားရှာလေရာ စားတော်ခေါ်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်မလာတော့ပေ။ ကျမ မြန်မာပြည်၌ ခြောက်လကြာနေထိုင်ပြီး ဘိလပ်သို့ ပြန်ရောက်လေသော် မေ့လျောခံ ပန်းသီးချဉ်ပုလင်းသည် မှိုများ ခ-လို့နေလေပြီတည့်။
“ဟင် … ဟုတ်လား … မှိုတက်ကုန်ပြီလား”
မအံ့သြသော်လည်း အံ့သြလေဟန် ကျမက မေးရသည်။
“အေး … မှိုတွေနဲ့ လွှင့်ပစ်လိုက်တော့”
ဂိုဒေါင်ထဲရှိ တချို့ပစ္စည်းများ ကျမ မရောက်ခင် လွှင့်ပစ်သည့် စာရင်းထဲ ပါသွားသော်လည်း ပန်းသီးချဉ် ပုလင်းကြီးကိုတော့ဖြင့် မည်သူမျှ လွှင့်မပစ်ကြဘဲ ဦးရီးတော်က ကျမကိုသာ ပစ်မိန့်ပေးလိုက်ပေ၏။ ကျမလည်း ဂိုဒေါင်ထဲ ၀င်ခလုတ် ထွက်ခလုတ် သွားနေပြီး ပန်းသီးပုလင်းကြီးကို မျက်စိဖြင့် ခဏခဏ မြင်နေရပေမယ့် တော်တော်နဲ့ လွှင့်မပစ်ဖြစ်။
အချဉ်ဆိုသည်မှာ နှစ်ပေါက်အောင် တည်ရသည်ဟု ကျမက တိတ်တခိုး ဆင်ခြေပေးမိသေးသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ကြီးတော်ကြီး မြန်မာပြည်မှ ဘိလပ်သို့ အလည်လာခိုက် သံပုရာသီးများ အချဉ်တည်ပေးထားရာ ၁ နှစ်ခွဲ ၂ နှစ်လောက် ကြာမှ ဖွင့်စားသော် အိစက် ပျော့ပြောင်း၍ အနံ့အရသာနှင့် အလွန်တရာ ပြည့်ဝလေသည်။ သို့သော်လည်း မုန်လာချဉ် ပဲတီချဉ်များကတော့ နှစ်ပေါက်အောင် ထား၍မရ။ နေပူလျှင် တပတ်ဆို ချဉ်ပြီ။ ပိုထားလျှင် အချဉ်လည်သွားပြီး စား၍ မကောင်းတော့။ ပဲတီချဉ်ဆိုလည်း ကြာကြာထားက ရိသွားတတ်၏။ ပန်းသီးချဉ်ကတော့ တခါမှ မတည်စဖူး ဦးဆုံးအတွေ့အကြုံမို့ ဘယ်လောက် ထားရမှန်း မသိသည့်အပြင် မေ့လျော့သွားသည်က တကြောင်း၊ ခရီးထွက်သည်က တကြောင်းတို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ မှိုများလာရောက် စုဝေးရခြင်း ဖြစ်ပေ၏။
ဤသို့ဖြင့် မိုးအုံ့သော နေ့တနေ့မှာ ပန်းသီးချဉ် ပုလင်းကြီးကို အိမ်ပြင်ထုတ်၍ ဖွင့်သည်။ ပုလင်းကို ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးကာ ပိတ်ထားသဖြင့် အပေါ်ယံတွင် တက်နေသော မှိုများကို ရုတ်တရက် မမြင်ရ။ ထိုသို့ပင် လောကကြီးသည် တခါတရံ အမြင်အာရုံကို လှည့်စားတတ်ပေသေးသည်။ ပုလင်းဖုံးကို ဖွင့်၍ ပလပ်စတစ် ခွါလိုက်သော် … …
ဘိလပ်ဆောင်း၏ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသော နှင်းပွင့်များသဖွယ် ပန်းသီးများထက်၌ မှိုပွင့်ဖြူများ လွှမ်းခြုံထားသည်ကို မြင်တွေ့ရလေတော့သည်။ အချိန်ကာလ၏ တိုက်စားမှုကြောင့်လေလား နေရာဌာန၏ မိုက်မှားမှုကြောင့်လေလား ပန်းသီးများ မှိုတက်၍သွားလေပြီ။ (ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး။)
လွှင့်ပစ်ရုံမှတပါး အခြားမရှိပြီလေ … ။
မှိုတက်သွားသော ပန်းသီးများကို ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားရန် ကျမ မမိုက်မဲ။
အချိန်မီ မစားလိုက်ရ လေခြင်းဟုလည်း နောင်တမရမိ။
လွှင့်မပစ်ရက် ဟူ၍လည်း နှမြောတသခြင်း ဖြစ်မနေ။
သူ့သဘောသူဆောင် သူ့သဘောင်သူဆောသည့် လောကကြီးတွင် ပန်းသီးချဉ် တပုလင်းသည် အရေးကြီးသည့် ကဏ္ဍမှာ ရှိနေမည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်သည့် အတိုင်း ပန်းသီးများကို ပုလင်းထဲမှ ထုတ်လိုက်သည်။ အမှိုက်ပုံးထဲ မထည့်ခင် ပုလင်းကို ဖုံးခဲ့သည့် ပလပ်စတစ် အိတ်ဖြင့် ထိုပန်းသီးများကို ထုပ်လိုက်သည်။ လက်ကျန် သံယောဇဉ် တပဲနိဖိုးလောက်ဖြင့် ပန်းသီးလေး တလုံးကို လက်သည်းနှင့် ဆိတ်ကြည့်တော့ မာနေတုန်း၊ ပျော့ရိမနေ။ သို့ပေသိ မှိုတက်နေသော ထိုအရာများကို မစားကောင်းသည့် အသီးဟု သဘောထားကာ အိတ်ထဲ အမြန်ထည့်၍ အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်လိုက်လေတော့သည်။ (ပန်းသီးပေးသူကိုတော့ အားနာပါ၏)
အားလုံးပြီးဆုံးသွားတော့ … ပန်းသီးချဉ်ပုလင်းကြီးကို ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် ဆေးကြော၍ နေလှန်းလိုက်သည့်အခါ ပုလင်းကြီးသည် ခန့်ညားထည်ဝါစွာဖြင့် နောက်တခါ အချဉ်တည်ရန် အသင့် ဖြစ်၍ နေချေပြီတကား။
ပန်းသီးများ မှိုမတက်ခင် အမြန်စားသုံးနိုင်ကြပါစေ …
၁၉၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၂
Posted by မေဓာဝီ at 12:01 AM 12 comments
ကျမနဲ့ မြန်မာပြည်ခရီး (အပိုင်း - ၁) ရေးပြီး အပိုင်း ၂ ကို မဆက်ခင် ပြောချင်တာလေးတွေရှိလို့ ဒီစာကို ချက်ချင်း ရေးခဲ့ပေမယ့် မအားတာနဲ့ အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုမှ ပြန်ဖတ် ပြန်ပြင် ပြန်ဖြည့်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ပထမပို့စ်ရဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပါပဲ။ အဲဒီပို့စ်မှာ Anonymous တယောက်က ခုလို လာရေးခဲ့ပါတယ်။
ဘာတွေဘယ်လို ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ကိုယ့်နိုင်ငံကဆို သစ်ရွက်၊ သစ်မြစ်လေးတွေကအစ နှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ … အဖွား အသက်ရှည် ကျန်းမာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ တခုရှိတာက လူတယောက် ကျန်းမာ အသက်ရှည်ဖို့ရာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား လေးပါးကြောင့်လို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေအတွက် အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ အစားအသောက်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍက ပါဝင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လဲ အာဟာရတခုထဲလား ဆိုတော့ ဟုတ်မှ မဟုတ်ဘဲ။ တခြား အကြောင်းသုံးပါးကိုလည်း မေ့ထားလို့မှ မရတာလေ။ ဒါကြောင့် healthy food တွေချည်း ဘယ်လိုစားနေနေ ကိုယ့်ကံပါလာသလောက်ပဲ နေရမှာပဲ၊ ကံကုန်ရင် သေမှာပဲ။ တွေ့ကရာ ရှစ်သောင်း စားနေလဲ ကိုယ့်ကံ အကျိုးပေးက ကောင်းနေရင် အသက်ရှည်မှာပဲ။ ဒါကြောင့် အသက်ရှည်ခြင်း တိုခြင်း ကျန်းမာရေး ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းဟာ အစားအသောက်နဲ့ သက်ဆိုင်ပေမဲ့လဲ အစားအသောက် တခုထဲပေါ်မှာတော့ မူတည် မနေပါဘူး။
ကြုံလို့ပြောရရင် ကျမအဘိုး (ဘုန်းကြီး) ဟာ အသက် ၈၄ နှစ်မှာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့တယ်။ သူ အသက် ၁၃ နှစ်သားကတည်းက ဆေးလိပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်ခဲ့တာ ပျံတော်မူတဲ့ အထိပဲ။ ဆေးပေါ့လိပ်၊ စီးကရက်၊ ဆေးတံ၊ ဆေးပြင်းလိပ် … အကုန်သောက်ခဲ့ဖူးပါသတဲ့။ ကြိုကြားကြိုကြား ကွမ်းလဲ စားသေးတယ်။ အဘိုးသောက်ပြီး ချထားတဲ့ ဆေးလိပ်တိုလေးတွေ ယူယူဖွာရင်း အသက်ကြီးမှ ဆေးလိပ် သောက်တတ်သွားတဲ့ ကျမအဘွားကတော့ အသက် ၅၀ ကျော်မှာပဲ ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်။ (အဘွားဆုံးပြီးမှ အဘိုးက ဘုန်းကြီးဝတ် လိုက်တာပါ။) ဆိုတော့ … ဆေးလိပ်သောက်ရင် ရောဂါဖြစ်မယ်၊ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ သေမယ်လို့ ဒီ့ပြင်လူတွေက ပြောပေမဲ့ အဘိုးက ငါ ၁၃ နှစ်သားကတည်းက သောက်လာတာကွ … ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ပြန်ပြောတတ်တယ်။
ဒါကြောင့် လူတယောက်နဲ့ တယောက်က နေထိုင်တဲ့ ဒေသချင်း၊ စားသောက်တဲ့ အစားချင်း တူရင်တောင် (တနည်း - ဥတုနဲ့ အာဟာရချင်း တူရင်တောင်) ကံချင်း မတူညီတာကြောင့် အကျိုးပေးချင်းလဲ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ သူမသေတိုင်း ငါမသေတော့ဘူးလား။ ဆေးလိပ်ကို တလိပ်နဲ့ တလိပ် မီးကူးပြီး အငွေ့ထောင်းထောင်း ထအောင် သောက်လာတဲ့ အဘိုးက တော်တော်နဲ့ မသေတာနဲ့ ၁၃ နှစ်သားမှာ ဆေးလိပ်သောက်သူသည် ၈၄ နှစ်ထိ နေရ၏ လို့ အဆိုတင်သွင်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အများအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အဆိုကတော့ “ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်” မဟုတ်လား။ ပြောချင်တာကတော့ … အချက်အလက်တခုကို အကျိုးအကြောင်းသင့် ပြောမယ်ဆိုရင် တဦးတယောက်ကို မကြည့်ဘဲ ယေဘုယျသဘောနဲ့ အများအတွက်ကို ကြည့်ပြီးမှ ပြောဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာပါ။
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို မချစ်တဲ့သူ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျမသည်လဲ ဒီထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င် ဆိုပါတော့ … ။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်လွန်းလို့ မြန်မာပြည်က အရွက်၊ အမြစ် မဆိုထားနဲ့ အစေ့အဆံရော၊ ပင်စည် အကိုင်းရော မြေကြီးထဲက ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲလေးတွေပါ ကျမက ဘိလပ်အထိကို ယူလာပါတယ်။ ဟုတ်တယ် … ကျမ ယူလာတာတွေက … မြန်မာပြည်ဖြစ် ပရီးမီးယား လက်ဖျော်ကော်ဖီမှုန့်ထုတ် .. အဲဒါက အစေ့ပေါ့ … ကော်ဖီစေ့ကို ကြိတ်တာကိုး။ အရွက်ထဲမှာဆိုရင် ဆူးပုတ်ရွက်ခြောက်, ခွေးတောက်ရွက်ခြောက်။ အမြစ်က … ဂျူးမြစ် … ဟုတ်တယ် ပဲပုပ်နဲ့ ကြော်ထားတာ စားလို့အလွန်ကောင်း။ ပင်စည်ကတော့ ငှက်ပျောအူ အခြောက်တွေ .. မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်ချက်ရအောင်လို့ပါ။ အကိုင်းကတော့ သနပ်ခါးတုံးလေ … ဆောင်းတွင်း မလိမ်းနိုင်ပေမဲ့ နွေဆိုလိမ်းရသေးတာ။ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲကလား … စိန်ကြောင် နီလာ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ဘာတွေပေါ့ … ဟဲဟဲ။ အဲဒီလောက်ထိ ကိုယ့်ပြည်ကို ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ကျမပါ … ။
ကျမယူလာတဲ့ အခြောက်များ :)
အမှုန့် ... အစေ့ .. အမြစ် ... အားလုံးကိုချစ်၏။
သို့ပေသိ … ရှိရှိသမျှ အစေ့အဆံ သီး ပွင့် ရွက် မြစ် အားလုံးကိုတော့ ကျမ မချစ်နိုင်ပေါင်ရှင်။ ဆိုကြပါစို့ … အုတ်တံတိုင်းနဲ့ အုတ်နံရံတွေမှာ ရေညှိတက်နေရင် ကြည့်လို့အင်မတန် ဆိုးတာမို့ အဲဒီရေညှိပင်တွေကို ကျမ မုန်းတယ်။ နောက်ပြီး “စေတီဘုရား၊ တည်ထားကောင်းလျက်၊ ညောင်ပင်ဖျက်” ဆိုတဲ့စကား ရှိတယ်မဟုတ်လား … ဘုရားစေတီတွေမှာ တွယ်ကပ်ပေါက်နေပြီး တစစ ၀ါးမြိုသွားမယ့် ညောင်ပင်အမြစ်တွေ … ကျမ မကြိုက်ပါဘူး။ အဲဒီလို အပင်တွေ အမြစ်တွေကို ကျမလက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ဆွဲမနှုတ်နိုင်သည့်တိုင် နှုတ်နိုင်သူတွေ သတိမူစေဖို့ တတ်နိုင်သလောက် ညွှန်ပြပေးချင်စိတ်တော့ အရှိသားလား … ။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့။
ကျမ ပြောချင်တာ အဲဒီသဘောပါ။ ချစ်တာတော့ ချစ်တာပဲ … ချစ်တယ်ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ် မချစ်ပါရစေနဲ့။ ခုလို ကိုယ်မြင်တာလေးတွေ အပြုသဘောနဲ့ ပြောတာမို့ ဒါကို ချစ်လို့ပြောတယ် မှတ်ပါ လို့သာ ဆိုပါရစေ … ။
နောက်တယောက်ကလဲ ခုလို ရေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ သူကလဲ Myanmar Lover ပါတဲ့။
“ရှင်းရှင်းလေးပါ … ။ မြန်မာပြည်က အစားအသောက်တွေ စားရမှာကြောက်ရင် မသွားနဲ့ပေါ့ …” တဲ့။ အဲဒါဟာ ကျမတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေလား … ။ ကျမတို့တွေ အများကြီး မျှော်လင့်လို့ မရဘူးတဲ့လား … ။
ကျမ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ စကားကြုံလို့ ပြောဖြစ်တိုင်း အမြဲ တမ်းတမ်းတတ ပြောမိတဲ့ စကားလေးတွေ ရှိတယ် … ။ မြန်မာပြည်က အရင်တုန်းကဆို နိုင်ငံတကာထက် ခေတ်ရှေ့ပြေးခဲ့တယ်၊ ခုမှ ခေတ်နောက်ကျသွားတာ ... လို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဥပမာ … စိုက်ပျိုးရေးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းက သီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေက ဓာတ်မြေသြဇာတွေ သုံးနေကြပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကတော့ နွားချေးလို သဘာဝ မြေသြဇာမျိုးနဲ့သာ စိုက်ပျိုးခဲ့တာမို့ အော်ဂဲန်းနစ် သီးနှံတွေ ကျမတို့ စားခဲ့ရတယ်။ မွေးမြူရေးဆိုလဲ သူများနိုင်ငံတွေ လှောင်အိမ်ထဲ ပိတ်မွေးထားတဲ့ မွေးမြူရေးကြက်တွေ ဖောဖောသီသီ စားနေစဉ်မှာ မြန်မာပြည်မှာ ဗမာကြက်မျိုး/ ကြက်ဥမျိုးပဲ စားခဲ့ရတာ။ အခု တခြားနိုင်ငံတွေက free-range ကြက်/ကြက်ဥဆိုပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ ကျမတို့ဆီမှာ မွေးမြူရေးကြက် (စီပီကြက် စီပီကြက်ဥ) ဆိုတာတွေ ပေါများလာပါတော့တယ်။ အဲ … မွေးမြူရေးဆိုလို့ အမျိုးသမီးတွေ ကလေးမွေးရင်လဲ အရင်က ရိုးရိုးပဲ ညှစ်မွေးကြတာပါ၊ သူများနိုင်ငံတွေ ခွဲမွေးနေတုန်းက မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ခေတ်မီစွာ သဘာဝအတိုင်း မွေးကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ မြန်မာပြည်မှာ ခွဲမွေးတာတွေ ခေတ်စားလာတာ မဟုတ်လား။
နိုင်ငံတကာမှာက မကောင်းမှန်းသိရင် ဆက်မလုပ်ဘူး၊ နောက်ပြန်လှည့်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်ကတော့ သူများတွေ နောက်ပြန်လှည့်ချိန်မှာ သူက ရှေ့တိုးလို့ကောင်းတုန်း … အဲဒါကိုမှ ခေတ်မီတယ် ထင်တုန်း။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာ နောက်ပိုင်း ကလေးမွေးရင် ရိုးရိုးသဘာဝ အလျှောက်ပဲ မွေးဖို့ ဆရာဝန်တွေက ပညာပေးတယ်၊ ဆွဲဆောင်တယ်။ လိုအပ်မှသာ ခွဲမွေးကြတာ … တဲ့။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုပြုသူတွေက ဓာတုဆေးဝါးတွေ မသုံးတဲ့ အော်ဂဲန်းနစ် သီးနှံတွေကိုသာ စားသုံးကြတယ်။ ဓာတ်မြေသြဇာသုံးရင်လဲ စားသုံးသူအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာထိ မသုံးစွဲကြဘူး။ လမ်းဘေးဆိုင်တွေကလဲ ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရောင်းကြတယ်။
ဘာများခက်လို့လဲ … အဲဒီလောက်တော့ ကျမတို့ မျှော်လင့်ခွင့် ရှိမယ်လို့ ထင်တာပါပဲ။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ အရွက်တွေ အမြစ်တွေ ထိုင်ချစ်နေရုံနဲ့ မဖြစ်ပါဘူး။ မျက်စိမှိတ်ပြီး ချစ်နေလို့က … နှစ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ “ဒီမှာကတော့ ဒီလိုပဲအေ့ … ညည်း မကြိုက်ရင် မလာနဲ့ အေ … ဒါပဲ” ဆိုတာကလဲ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ၊ လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေတာပါပဲ။ လုပ်ချင်ဖို့နဲ့ လိုက်လုပ်ဖို့ပဲ လိုနေတာ မဟုတ်လား။
စာလဲ ရှည်သွားပါပြီ။ ဒီစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလဲ လွတ်လပ်စွာ အမြင်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ကျမစာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသူ အမည်ပါပါ မပါပါ ကျမ လေးစားပါတယ်။ အမည်မပါပေမဲ့ ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်အတွေးကို ချရေးသွားတာပဲလေ။ တခုတော့ တောင်းပန်ပါရစေ … ကျမ စာအရေးအသားနဲ့ တင်ပြပုံ ညံ့ဖျင်းရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါရှင်။
၁၆၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၂
Posted by မေဓာဝီ at 12:55 PM 15 comments
"weeping likeawillow" ... တဲ့ ... ။
တရက် ... ဦးရီးတော်ရယ်၊ ကျမရယ်၊ ခဏလာလည်တဲ့ မောင်ဝမ်းကွဲရယ် အတူ ကားလေးနဲ့ လျှောက်သွားကြရင်း လမ်းတလျှောက် တွေ့ရတဲ့ သစ်ပင် ပန်းပင်တွေအကြောင်း ပြောလာကြတယ်။ ဆောင်းဦးရာသီမို့ သစ်ရွက်တွေက အရောင်ပြောင်းစပြုပြီ။ ပန်းတွေကတော့ ဝေနေတုန်း၊ အရွက်တချို့က ကြွေ ... တချို့ကဝေ ... ဆောင်းမ၀င်သေးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က လှနေတုန်းပဲ။ ဒီလိုနဲ့ လမ်းမှာ ဖြတ်သွားရင်း လေလာတိုင်း ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ မိုးမခပင်တွေကို မြင်တော့ ဦးရီးတော်က "weeping likeawillow" ... တဲ့ ... အဲဒီလိုပြောတယ်။ သူပြောလိုက်တာကို ကျမစိတ်ထဲက လိုက်ရွတ်ရင်း အဲဒီစကားလေး သဘောကျ နေမိတယ်။ အဲဒီနေ့က မိုးမခပင်တွေတွေ့တိုင်း weeping likeawillow ဆိုတဲ့စကား ဦးရီးတော်ဆီက မကြာခဏ ကြားလို့ပေါ့ ... ။ ကျမကတော့ မိုးမခပင်တွေမြင်ရင် ကျမသိပ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတပုဒ် "အေးအေးငြိမ့် စိမ့်ရေစီးတဲ့ မြကန် ... အစချီတဲ့ ... မိုးမခပင်တွေ ... ဒို့သက်သေတည် ... ဆိုတဲ့ မွန်းအောင်သီချင်း တပိုင်းတစကို စိတ်ထဲက အမြဲသတိရမိတာ။
ရက်တွေသာ ကြာသွားတယ် ကျမစိတ်ထဲမှာ weeping willow က မထွက်သေးဘူး။ အဲဒါ သာမာန် usage သက်သက်ပဲလား၊ သီချင်းစာသားလား ခေါင်းစဉ်လား ... မမေးရဲလို့ ဦးရီးတော်ကို မမေးဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ အားတုန်းလေး ဂူးရီးတော် (ဂူးဂဲလ်)နဲ့ ဟူးရီးတော် (ရာဟူး) တို့ကို မေးကြည့်လိုက်တယ်။ သူတို့က အဖြေတွေ အများကြီးပေးပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တာလေး ရွေးပြီးကြည့်တော့ သီချင်းလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ ခေါင်းစဉ်လေးက စိတ်ဝင်စားစရာ ... Bury me under the weeping willow တဲ့။ ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ မိုးမခပင်အောက်မှာ ငါ့ကိုမြှုပ်ထားပါ ... ဆိုပါလား။ ဒါနဲ့ လင့်ခ်လေးကို နှိပ်လိုက်တော့ ... ... ... ။
သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး ကြေကွဲသွားတယ်။ မူရင်းက The Carter Family ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ကျေးလက်သီချင်းလေးပါ။ မူရင်းကို ကျမသိပ်ခံစားလို့မရဘူး။ ယောကျာ်းအဆိုတော်တွေ ဆိုထားတာလဲ သိပ်သဘောမကျဘူး။ အခုလင့်ခ်က အဆိုတော် Rosanne Cash ရဲ့ အသံနဲ့ ဆိုဟန်ကို သဘောကျလို့ သီချင်းစာသားလေး ကူးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မတောက်တခေါက်နဲ့ ဘာသာပြန်ကြည့်ပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့ ကဗျာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့သံစဉ်အတိုင်း ဆိုလို့ရမယ့် မြန်မာ သီချင်းစာသားလေးပေါ့။ တိုက်ရိုက်ပြန်ထားတာ မဟုတ်လို့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ (အင်္ဂလိပ်စာလဲ ညံ့လို့ပါ။) တချို့နေရာတွေမှာ အသံကို ငဲ့ပြီး (ဖြစ်သလို) ပြန်လိုက်ရတာတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေပေါ့လေ .... ကျမအတွက် ဆိုညည်းစရာ သီချင်းလေးတပုဒ် ရသွားတဲ့အတွက် အမှတ်တရ ဘလော့မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှု ခံစား နားဆင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် .... .... .... ။
"မိုးမခပင်အနား ငါ့ကိုမြှုပ်ထားခဲ့ပါ ..."
My heart is sad and I am in sorrow
When shall I see him?
Oh no, never, till we meet in heaven above
ဒဏ်ရာ အချစ်ဆုံး ကြောင့်ပါ
နိုင်မှာ ကိုယ် .. သိချင်တာ … ။
And perhaps he'll weep for me
အို နွဲ့ယိမ်းလှုပ်ရှား မိုးမခပင်အနား
ဒါဆို သူငိုလိမ့်မှာလား ... ။
Until an angel soflty whispered
'He has proven untrue to you'
သူများ ပြောစကား မယုံမိခဲ့ပါ
သူဟာ သစ္စာမဲ့လေတာ … ။
သူ သိသွားမလား ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာ
ဒါ ဆို သူငိုလိမ့်မှာလား ... ။
Well, tomorrow was our wedding day
But Lord oh Lord, where is he?
ခုများ ကိုယ့်အနား သူမရှိတော့ပါ
အချစ်သစ် သူလေ တွေ့နေတာ … ။
So bury me beneath the willow
ဒါဆို သူငိုလိမ့်မှာလား …။ ... ။
ဒါဆို ... သူ ငိုလိမ့်မှာလား ... တဲ့ ... သူတော့ ငိုမငို မသိပါဘူး ... ကျမတော့ နားထောင်ရင်း ငိုချင်လာမိတယ် ... တကယ်။ သြော် ... အလွမ်းဓာတ်ခံ ရှိသူမို့လား မသိပါဘူးလေ ... ။
၁၂၊ ၁၀၊ ၁၂
Posted by မေဓာဝီ at 12:28 AM 10 comments
ဘ၀က - ခါး ... တယ်။
ဘာကို အပြစ်တင်ရမှာလဲ ... ။
ဘ၀က - မှား ... တယ်။
သွေဖယ်တဲ့လမ်း အမြဲလှမ်းခဲ့တဲ့ ငါ -
ဘာကို နာကျင်ရအုံးမှာလဲ ... ။
ဘ၀က - ရှား ... တယ်။
အခါခါ နေသားကျနေမှပဲ ... ။ ... ။
၁၀၊ ၁၀၊ ၁၂
(မအားလို့ စာအများကြီး မရေးနိုင်ခင် စပ်ကြား ဒီကနေ့ ရထားပေါ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ စာတိုကလေး တင်လိုက်ပါတယ်။)
Posted by မေဓာဝီ at 5:00 PM 12 comments
Posted by မေဓာဝီ at 9:45 AM 21 comments